Video:-Madaxweynaha Somaliland oo baaq u diray Beelaha ku dagaallamaya Sanaag – idalenews.com
Madaxweynaha Somaliland ayaa Baaq Nabadeed U Diray Beelaha Dagaalku Ku Dhexmaray Degaanka Ceel-afweyn Ee Gobolka Sanaag Gaar Ahaan Degmada Darar-weyne.
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaqaasi ku yiri “Waxa aan ugu baaqayaa beelaha ku diriraya degaanka Ceel-afweyn ee Gobolka Sanaag, gaar ahaan Degmada Darar-weyne inay si deg-deg ah u joojiyaan colaadda soo noq-noqonaysa ee dhex taalla labada beelood ee walaalaha ah.
“Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinku baaqayaa inaad colaadda damisaan oo aad Alle ka cabsataan, hoosna u eegtaan dhiiga bilaa micnaha aad u daadinaysaan ee aad agoomaha iyo goblanka kaga dhigaysaan hooyooyinka iyo caruurta, sideedaba dagaal wiil kuma dhasho ee wiilbaa ku dhinta. Dilka iyo dhiiga micno darada ku daadanayaana dadkeena kama go’o, ee wixii is maandhaaf ah ee jira waa in lagu dhammeeyaa is afgarad lanna tixgeliyaa nabadgelyada, is xaqdhawrka derisnimo ee wada noolaanshaha iyo degenaanshaha leh.” ayuu yiri Markale Muuse Biixi Cabdi.
Sidoo kale waxaan uu madaxda dhaqanka ee labada dhinac ugu baaqay inay sida ugu dhakhsaha badan uga hawl-galaan daminta colaaddaasi, una hoggaansamaan ciidamada amniga ee ku hawlan arrintaasi garab buuxana ku siiyaan sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa.